वि.सं १६ श्रावण २०७५, बुधबार ०५:४०
अनुहारमा खटिरा जस्ता दानाहरु वा कालो दाग आएर धेरै व्यक्तिहरु हैरान देखिन्छन् । आफ्नो अनुहारको सौन्दर्य बिग्रीएकोमा चिन्तित हुन्छन् । अनुहारमा देखिने खटिरा जस्ता दानाहरुलाई नै डण्डीफोर भन्ने गरिन्छ ।
विशेषगरी १३–१४ देखि २४–२५ वर्षका युवायुवतीहरुमा डण्डीफोरले सताउने गर्दछ । डण्डीफोर प्रायःजसो अनुहारमा देखिने भए ता पनि छाती, काँध, र पिठ्युँ समेत डण्डीफोर निस्कने गर्दछ । डण्डीफोरले अनुहारको सौन्दर्य बिगारेकोमा चिन्ता लिईरहनु पर्दैन । जीवनशैली र खानपानमा ध्यान दिने हो भने डण्डीफोर जस्ता समस्याहरुबाट मुक्त हुनसकिन्छ । डण्डीफोर ठूलो समस्या होइन, तर तपाईँको प्रतिवद्धता ठूलो कुरा हो । अनुहार सुन्दर राख्ने सामान्य पाँच उपायहरु :
१. साबुन र रसायनयुक्त फेसियल प्रयोग नगर्नुहोस
अनुहार सुन्दर बनाउने होडमा जताभावी फेसियल क्रिम प्रयोग गर्ने वानीलाई त्याग्नुहोस् । अनुहारको छाला सुहाउँदो प्राकृतिक जैविक फेसियल क्रिम मात्र प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । शरीरमा विषाक्त तत्व जम्दा छालामा खटिरा निस्कन्छ । यसैले अनुहारको चमक बढाउन र डण्डीफोरको उपचारको लागि ओलिभ आयल, कागतीको रस, खाने सोडा, आलु, गोलभेंडा, मह, चन्दन पाउडरलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।
२. कब्जियतबाट बच्नुहोस्
हामी मुखको स्वादका लागि खाना खान्छौं । सम्पूर्ण रोगको आधारविन्दू नै खाना हो । पेट खाली राख्नु हुँदैन । यसैले खाना खाँदा आफ्नो शरीरको प्रकृति अनुसार खाना खाने बानी विकास गर्नुपर्दछ । विशेषगरी मसालेदार, तारेभुटेको खाना खानु हुँदैन । स्वादको लहै लहैमा मिठाई, नुन, मैदा, चिया, कफी ज्यादा सेवान गर्नुहुँदैन ।यस्ता खानाले कब्जियत बढाउँछ । कब्जियतले अनुहारको चमक घटाउँछ ।
३. प्रशस्त पानी पिउनुहोस्
सबै मानिसले उमालेको पानी पिउने बानी बसाल्यो भने आधाभन्दा बढी रोग स्वातः कम हुने विज्ञहरुको दाबी छ । यसैले शुद्ध र स्वास्थ्य पानी पिउने बसाल्नु पर्दछ । धेरै मानिसहरु पानी कम पिउँने गर्दछन् । यसरी पानी कम पिउँदा पनि शरीरको स्वास्थ्यमा असर पार्दछ । यसैले दैनिक पानी पिउने तालिका बनाएर पानी पिउने बानी बसाल्नु राम्रो हुन्छ । नियमित पानी पिउँदा अनुहारमा चमक आउँछ ।
४. जिङ्क तथा भिटामीनयुक्त खाना खानुहोस्
हर्मोनको गडबढीले पनि अनुहारमा डण्डीफोर आउँछ । यसैले चिल्लो, बोसोयुक्त खाना खानुहुँदैन । भिटामिन ए युक्त खानाहरु अण्डा, दुध, मेवा, गााजर, पालुङ्गो, भिटामीन इ युक्त दानाहरु चोकरसहितको गहुँ, जौको पिठो, हरियो सागपात र जिङ्कयुक्त दाना गहुँ, दाल, पेस्ता, देशीबदमा, अुदवा का साथै ताजा फलफूल खानुपर्दछ । जिङ्क र भिटामिन युक्त खानाले अनुहारलाई चम्किलो बनाउनको साथै डण्डीफोर लगायतका अन्य खटिरा आउन दिँदैन ।
५. मानसिक तनावबाट मुक्त हुनुहोस्
मानसिक तनावले पनि छालालाई असर गर्दछ । योग, ध्यान गर्ने बानी बसाल्नु राम्रो हुन्छ । नीम पानीले अनुहारमा ५–७ मिनेट बाफ लिनु राम्रो हुन्छ । आपैंmले आफैंलाई सकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ । तनावमुक्त जीवन नै सुन्दर जीवन हो । तनाव मुक्त मानिसको अनुहार चम्किलो र सुन्दर हुन्छ ।
मेवाको पातको जूस पिउनु भएको छ? छैन भने आजै सुरु गर्नुहोस।